Maitiro ekudzivirira Apple kubva pakuteerera kune edu ese hurukuro | IPhone nhau
Maitiro ekudzivirira Apple kubva pakuteerera kune edu ese hurukuro
Munguva pfupi yapfuura uye kusunga zvisungo zvakawandisa pane chikamu cheAmazon neFacebook maererano nezve zvakavanzika, zvinoita sekunge kambani inotakura kuchengetedzwa kwekodzero yekuvanzika iri kuitawo zvishoma mukuteerera kukurukurirana kwedu «pasina Ruregerero rwedu".
Nekudaro, panogara paine anovandudza anoda kutibatsira uye kuchengetedza kwedu zvakavanzika nenzira iri nyore, handizvo here? Isu tinokuratidza maitiro aungaita kuti Apple isateerere zvese zvekutaurirana zvaunazvo naSiri neiyi marongero kubva kune yako iPhone, nyore uye yakapusa.
Hakuna kupi mukuzivisa nezve vanoita kontrakta vanoteerera zvikumbiro zvaSiri ini ndaona gwara rekumisa izvi. Chidimbu naGuardian chinoti hazvigoneke kubuda, uye zvese zvinotevera zvinyorwa zviri kudzokorora kukanganisa kumwe chete. Aya ndiwo maitiro: https://t.co/cbZXIipma0 Unogamuchirwa
- Jan Kaiser 🛡️ (@ jankais3r) July 29, 2019
Maererano ne The Guardian, iyo Cupertino kambani yakaendesa pasi kune imwe kambani inoona nezvekuteerera kukurukurirana kwedu naSiri, Idzi nhaurirano dzinoongororwa neaya mahunyanzvi, zvisinei nezviri mukati mazvo uye neruzivo rwezviri mariri. Mukufunga, Apple inoita izvi kusimudzira Siri, uye izvo ndezvekuti mubatsiri wayo ari kudonha matanho mashoma pazasi peA Alexa neGoogle Mubatsiri, vanokwikwidza zvakanyanya. Aya ndiwo matanho ari nyore aunofanirwa kutevera kuita kuiswa kweiyo profiles iyo inodzivirira iyi kambani kuburitswa neApple kuteerera nhaurirano dzako naSiri uye nechimwe chinhu:
Pinda iyi link kubva ku iPhone yako izvo isu tinokusiya iwe pazasi kurodha pasi chimiro> LINK
Gamuchira uye download pasi
Enda ku Zvirongwa> Zvakajairika> Maprofiles uye inopa kuvimba neprofile kuti ikwanise kuita kuti ishande
Iyi nhoroondo inodzivirira yako Siri data uye nhaurirano dzako kuenda kuseva uko kwavachaongororwa uye kuongororwa, mune dzidziso, kugadzirisa Siri kuita. Ndozvazviri nyore kudzivisa kuongororwa neApple, Panguva ino, sezvakaitika muzuva rayo nemabhatiri uye mashandiro avo, inguva yakanaka kuti Apple iratidze vavariro yayo yechokwadi uye pafiripi switch mumasetingi anotibvumidza kuti tidzivise izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzivirira Apple kubva pakuteerera kune edu ese hurukuro
Ndinovimba kushoma kwakatangira chimiro icho kupfuura Apple inoteerera kune zvandinotaura kuna Siri.
Iwe uchiri kufunga kuti iyo Apple ecosystem haina kukanganisa uye super-recontra-hyper zvakavanzika?
Kuti hapana anokuona?
Meseji dzako hadziverengeki kwauri?
Ivo vane ako mafoto, chigunwe chako, kumeso kwako uye ivo vanoziva ako mabhatani munguva chaiyo!
Chii chinoshamisa tekinoroji !!!
Kuti udzivise Siri, iwe unofanirwa kuisa chimiro chakasainwa nechero ani? ... Zvishoma pane zvakakomba uye kusagadzikana.
Uye chiizve chimwe icho icho chimiro chinoita?
Izvi zvinoita kuti Siri asuke ndiro
Zvishoma ndapota ...
Izvo zvinoita senge iri rakakomba blog kukurudzira vashandisi kudhawunirodha isina kuvimbiswa chimiro uye pasina kupa kunyange kana zvishoma ruzivo rwakawanda nezvazvo. Kunyanya zvakadaro kana uine akawanda mapositi kuraira pamusoro pavo…
Kana iwe uchida kuvanzika uuye kuApple, vakati ...
Pindura kuna Luisma
2020 iPhone inogona kuwedzera 3D yekumashure kamera nekufamba kwekufamba
Hezvino izvo zvitsva muIOS 5 beta 13